Times24 Nepal » रवि लामिछानेको विवाहमा को को पुगे ? हेर्नुहोस् तस्बिर
रवि लामिछानेको विवाहमा को को पुगे ? हेर्नुहोस् तस्बिर
काठमाडौं । फिल्म निर्मात्री तथा चलचित्र विकास बोर्डकी निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेल र चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले लगनगाँठो कसेका छन् । शुक्रवार दिउँसो नगरकोटको होटल मिष्टिक माउन्टेनमा परिवारका सदस्य र आफन्तको उपस्थितिमा रविले निकिताको सिउँदो भरेका हुन् । दुई पक्षका निकै नजिकका आफन्त मात्र विवाह समारोहमा सहभागी थिए ।